ဆုံဆည်းရာ: ဒေါန… ဟောင်သရောနဲ့တာအို့ ထ
ဒေါန… ဟောင်သရောနဲ့တာအို့ ထ
(ရဲဘော်ကြီး ကိုနေမျိုးက ရှေ့တန်းတခေါက်ထွက်သွားတာ ဒီကဗျာရှည်ရေးလာခဲ့တယ်၊ ခုလည်းတခေါက် ထပ်ထွက်သွားပြန်ပြီ၊ ဒါမျိုးတွေရေးလာဦးမယ်လို့ ယုံကြည်တယ်၊ လေးစားတယ် ရဲဘော်ရေ...။)
လိုချင်တာ ပြောရရင် …
တက်ကျမ်းဆရာဆီက ခဲယမ်းဝယ်ဖို့ နည်းနာလိုချင်တယ်
ကုလသမဂ္ဂဆီက ငြိမ်းချမ်းရေးတပ် လိုချင်တယ်
စီးပွားရေးသမားဆီက ငွေကြေးအကူအညီ လိုချင်တယ်
ဘုရားသခင်ဆီက ထာဝရတော်လှန်ရေးသမားကို လိုချင်တယ်
ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်က မိတ်ဆွေကောင်းတွေကို လိုချင်တယ်
အကျဉ်းကျနေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို လိုချင်တယ်
ပြည်သူလူထုအတွက် ဒီမိုကရေစီ လိုချင်တယ်
မေမေဆီက မေတ္တာတရားကို လိုချင်တယ်
ကျနော့်ဆီက ရိုးသားမှုကို လိုချင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ … ကျနော်တို့နေတဲ့ရွာကို
မရှိမဲ့ ရှိမဲ့ ရွာသားတွေ
မနက်ဖြန်ဆို ယိုးဒယားဘက် ကူးပြီး
ဘိုင်း .. ဘိုင်း .. မင်္ဂလာတံတားရေ…။
ရင်ခုန်သံစနှစ်တကျနဲ့တလှမ်းချင်းလှမ်း
တက် … ဆင်း
ပြီးတော့ …. ချောင်းဖြတ်များစွာကို ဖြတ်လို့ 
သင့် ဆီကို ရောက်လာခဲ့ပြီ။
ကမာတလုံးတည် ချောင်းဖျားကို တွေ့ မြင်လိုက်ရ
ငါတို့ ကို မာယာကြီးစွာနဲ့ကြိုဆိုနေပေါ့ ။
ပြီး … ရှေ့က ရွာတန်းလေးရဲ့ ခေါင်းမိုးတချို့ ကို လှမ်းကြည့်
ဒါ … ပထမ ရည်မှန်းချက် ဖြစ်ရဲ့ 
ဟုတ်ပါရဲ့… ဒီနေ့သင်္ကြန်အတက်နေ့ 
သောကြာနဲ့စတဲ့ ရွာ ဖြစ်တယ်
ရှေ့နားမှာ လုထိုင် စောင့်နေရဲ့
နွေရာသီ စမ်းချောင်းဘေးအနား ခြေကုန်လက်ပမ်းကျ
လူတချို့ဘေးနားမှာအမောဖြေရင်း စကားပြောနေရဲ့ 
ငါတို့ရောက်ရမယ့်ရွာက သဒဲခို့ ရွာ။
ဒီနေ့… နှစ်ဆန်းတရက်နေ့ 
ညနေဆိုရင် ဆေးမူဝါးတွေ ဘုရားဖူးသွားမယ့်နေ့ 
အမေအိုတွေ ဦးကြီးတွေ ခလေးငယ်တွေ ဘုရားဖူးသွားမယ့်နေ့ 
ရွာခံလူငယ်တချို့က ဖိုးဖီးကားတစီးနဲ့ 
အပျိုမတချို့ ရေဖလားကိုယ်စီနဲ့ 
ကားပေါ်မှာ ရေတိုင်ကီတလုံးနဲ့ 
အမိုးချက်တဲ့ဂျစ်ပုံးတပုံးလည်း ပါရဲ့ 
ရွာနီးတ၀ိုက်ရွာများဆီ ရေပက်ခံထွက်လို့ 
ဒိုးပတ်ဝိုင်းနဲ့ အပြိုင်အဆိုင်ပေါ့ ။
အမိုးချက်တဲ့ပုလင်းနဲ့နေညိုချိန်ကို ဦးညွတ်ဂုဏ်ပြုလိုက်တယ်
ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းရဲ့ဆွမ်းစားရုံအောက်
ဆည်းဆာနဲ့ အပြိုင်ဆေးမူဝါးတို့ ရဲ့လှပမှုထဲ နွံနှစ်
ရဲဘော်တယောက်ဆို ပါလာတဲ့ ဗွီဒီယိုကင်မရာနဲ့ 
ဆေးမူဝါးတို့ ရဲ့ အလှတရားတွေကို
မယ်မိုရီထဲ ဖြည့်သွင်းနေလေရဲ့ ။
တွန်း.. ဆင်းတွန်း … တွန်းကြ
လုထိုင်အထွက် လူလဲ မှောက်လျှက်လဲပေါ့ ။
ရွာဆိုတာ ကိုယ်လူ သူ့ လူနဲ့ 
သို့ ပေမယ့် .. အေးရာအေးကြောင်းပဲတဲ့။
မြေသားလမ်းက ကျဉ်းလို့ 
ဗြုန်းကနဲ့ရွာလမ်းကလေးက ဆီးကြို
လွတ်တော်မှာ အာဏာသိမ်းပွဲတွေနဲ့အသားကျ
သေနတ်ကိုယ်စီနဲ့ကားပေါ်မသက်မသာလိုက်ပါလို့ 
လမ်းတလျှောက် တပ်ခွဲအသီးသီးကို ဖြတ်ကျော်ရင်း
လမ်းလျှောက်သူ ရဲဘော်တချို့ ကို အော်ဟစ်နောက်ပြောင်
ကုန်းပြောင်ပြောင်တောင်ယာကုန်းက သူ့ ကြောပေါ် ငါတို့ ကို ထမ်းပိုးလို့ ။
အဲဒါ … ကျိုက်ဒုံမြို့ တဲ့
ကားလမ်းက ဖြူးလို့ 
ရုတ်တရက် .. တံတားအဖြတ်မှာ
ရိပ်ကနဲ့ရိပ်ကနဲ့ 
နောက်ဘက်မှာ ဖုံးလုံးကြီးသာ တ၀ုန်းဝုန်းကျန်ရစ်ခဲ့။
ငါတို့သူမဆီ မရောက်ဖြစ်တာ ၁၅ နှစ်နဲ့၈ လ
သူမက အပြောင်းအလဲကြီး ပြောင်းလဲ
တချို့ဆို အိမ်ကြီးရခိုင်နဲ့ခမ်းနားလို့ 
အပျိုမတွေက လှလို့ဝလို့ 
ဒူးရင်ပင်တွေက ပိုလို့ ပိုလို့မြှင့်လာသလို
ကွန်ခြံတွေက ပိုလို့ ပိုလို့ကျယ်လာခဲ့
ငါစာပေးခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးတောင် အခု ခလေး ၅ ယောက်နဲ့ 
ဟိုဘက်အိမ်က ဘီဂျီအက်ဖ် အိမ်ဆိုပဲ
သူမရဲ့ အလှက လှမြဲလှဆဲ။
ငါတို့ က တက်တက်ကြွကြွ
ဆက်သွယ်ကြ ညှိနှိုင်းကြနဲ့ 
ဗြုန်းဆို အာပီဂျေတချက်နဲ့တိုက်ပွဲစခဲ့
ပစ် … ပစ်…
ဒီဖောက်ပြန်နေတဲ့ ရန်သူတွေကို ပစ်
သူတို့ငါတို့ နယ်မြေကို ချေကုတ်ယူဖို့လာနေတာ
ပစ် …. အဲဒီ လခစား လူ့ မိုက်ရိုင်းတွေကိုပစ်
ပစ် … အဲဒီ စစ်ခွေးကနေ မြို့ခွေးဖြစ်လာတဲ့သူတွေကို ပစ်သာပစ်
ပစ်ဟေး … ပစ်။
ရန်သူလည်း အလဲလဲ အကွဲကွဲနဲ့ 
လူနာပို့ တဲ့ စစ်ကြောင်းက လူနာပို့ လိုက်နဲ့ 
ပတ်ရှောင်တဲ့ စစ်ကြောင်းက ပတ်လမ်းကို ရှာလိုက်နဲ့ 
ရန်သူက ညဘက်ဆို ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်လိုက်နဲ့ 
ရွာသားတွေခမျာ အိမ်အောက်ပုန်းကျဉ်းထဲမှာ ထမင်းစားလို့ ။
မင်းရဲ့ရွာသားတွေလည်း ပင်ပန်းလှပြီ … မိနာအ
ကျနော်တို့သွားတော့မယ်
ရှေ့ ခရီးအတွက် သွားပြီ … မိနာအ
နောက်တခါ တခေါက်ပေါ့ ။
ဒါ … အိမ်မက်မဟုတ်ဘူး
သူတို့အဖိုးအခနဲ့အာဏာသိမ်းလိုက်ပုံများ
အခု ၅ နှစ်ပြီးရင် နောက် ၅ နှစ်ပေါ့ 
ပြီးရင် … နောက် ၅ နှစ်….။
အသစ်ပြီးရင် အဟောင်းမလာဖို့အရေးကြီးတယ်
ဟေး … လူ့ မိုက်ရိုင်းတွေ အာဏာမသိမ်းကြေး။
လမ်းဘေးတဖက်တချက် ဆိုင်တန်းတွေနဲ့ 
ပအို့ မလေးက သနပ်ခါး ပါးကွက်နဲ့ 
ခလေးမလေးတွေ ဆံပင်ကို စုစည်းထားတာ
လမ်းကလေးနဲ့ လိုက်ဖက်လို့ 
ဟိုဘက်ချမ်းကဆို တောင်ပေါ်က ကရင်အပိုင်းပေါ့ 
အမိုးတယောက်ကတော့ သူ့ အိမ်အောက်မှာ ပုန်းခိုကျင်းတကျင်း တူးနေလေရဲ့ ။
ဘုရားကုန်းဘက်က လက်နက်ကြီးနဲ့ပွိုင့် ၅ ကလည့်း ရမ်းသမ်းပစ်လိုက်သေးတယ်
အိမ်က အမိုးမိသားစုဆို ပုန်းခိုကျင်းထဲ ဆင်းလိုက်တက်လိုက်နဲ့ 
ကျောပိုးအိတ်ကို ဗုန်းကနဲ့ ပစ်ချ
လူက ခြေပစ်လက်ပစ် ကိုင်းတောကြားထဲ လှဲချလိုက်တယ်
ကရင်လူမျိုးတို့ ရဲ့နန်းထိုင်ခဲ့တဲ့ရွာ နောင်တမန်မှာ
နေပူလိုက် မိုးရွာလိုက်နဲ့ 
တောနင်းလို့ ရောက်လာခဲ့ပြီ … ကော့ဆိုင်
အိမ်မက်တွေကို ဖန်တီးဖို့ ပါ … ကော့ဆိုင်
ဒီည .. သင့်ရဲ့ သွေးကြောပေါ်မှာ ငါတို့အိပ်စက်မယ် … ကော့ဆိုင်။
ကော့ဆိုင်မှာ တကာကြီးနဲ့ တွေ့ တယ်
ဘီယာနဲ့ တွေ့ တယ်
ဂရမ်ရိုင်ရယ်နဲ့ တွေ့ တယ်
ညဘက် .. အိမ်အပြန် လမ်းတွေ မှားတယ်။
မီးစက်သံတညံညံနဲ့မိုးဟေကိုပါတဲ့ စီဒီကိုကြည့်လို့ 
ဟိုအရှေ့ဘက်ဈေးဆိုင်က ခေတ်ပေါ်ရက်စ်သီချင်းကို ဖွင့်လို့ 
အိမ်ပေါ်မှာအဖိုးက လမ်းလျှောက်စကားပြောစက်ကို အဖော်ပြုလို့ 
ခုဒုံမှာ ညဘက်ဆို ခြင်အရမ်းကိုက်တယ်။
ဆေးမူဝါးတွေ လှတဲ့ စက်က၀က်မှာ
လမ်းပေါ်မှာ ဒူးရင်ကုန်သည်တချို့ 
ဆိုင်ကယ်ကိုယ်စီနဲ့လမ်းသလားနေဆဲ
အိမ်ရှေ့ကအမိုးသမီး ရိုးရာတေးတပုဒ်ညီးရင်း သင်တိုင်ရက်လို့ 
အိမ်ကအနော်က စားဖို့ ဒူးရင်သီးတချို့နဲ့ ငါတို့ကိုအဖော်ပြုခဲ့။
အနော်သမီး နော်ပဲ့နဲ့ လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တယ်
လမ်းတလျှောက်ဒူးရင်သီးနှံ့ တို့ ကြိုင်လှိုင်လို့ 
မနက်ဖြန်ဆို စစ်ဆင်ရေးတခု စပြီးမို့ 
အာရုံသိက တခွက်စာလောက်ပေါ့ လို့ နိုးဆော်
နော်ပဲ့ကိုချီပိုးလို့ခြေဦးလှည့် ညနေခင်းကို ကြိုဆိုလိုက်တယ်။
သေနတ်သံနဲ့ လက်နက်ကြီးသံတို့ ရောစွက်
မဟာမိတ်တပ်မှူးတယောက်က စက်တလုံးနဲ့ ဟန်ရေးပြ
မနက်ခင်း အာရုဏ်ဦးအောက်မှာ ခမ်းနားကြီးမြတ်နေပုံများ
ကမ္ဘာကျော်ပန်းချီးဆရာတောင် ဆေးစပ်ဖို့လက်တွန့် နေမိရော့မယ်။
လူတယောက်ရဲ့ အထက်မှာ လူတယောက်ရှိရမယ်တဲ့
အမိုးကတော့ ဒါတွေကို မသိဘူးတဲ့
ဧည့်သည်တွေဖြစ်တဲ့ ငါတို့ ကိုကျွေးဖို့ သီးနှံတွေခူး
ဒါနေ့ စဉ်အလုပ် ဗမာစစ်သားတွေဆိုရင်တော့ ကြောက်တယ်လို့ပြောတယ်။
ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေ ဗမာစစ်တပ်ကို မုန်းလိုက်ပုံများ
ဗမာစကားပဲ ပြောတတ်တဲ့ကျနော်တို့ တောင်
ဒါ … ရှစ်လေးလုံး(ဂဂဂဂ) .. ဖြစ်တယ်။
ခေတ်တခေတ်ကို ရှေ့ ကနေ အထူးပြုလို့ 
သူတို့ခေတ်တွေကို အရောင်ဆိုးနေကြတယ်
အလွမ်းတွေကိုယ်စီနဲ့ရိုးသားနေလိုက်ကြတာ
မေမေရယ် … ခေတ်ကြီးကိုက ဟောင်းနွမ်းနေတာပါ။
ပြည်တွင်းစစ်မီးထဲ ငါတို့ စီးဆင်းဆဲ။
အင်္ဂလန်က ကောင်မလေးရေ …
မင်းကိုလွမ်းရတဲ့အကြောင်း စာလွှာတစောင်ပါလိုက်ချင်ရဲ့ ။
လမ်းပေါ်မှာ စစ်ဖိနပ်ရာတွေ ပွစာကြဲလို့ 
ရွာသားတွေလည်း ပုန်းခိုကျင်းထဲ ၀င်ပုန်းလို့
ကင်းလိုက်တောင်ကြောကို ငါတို့အတူ တက်ခဲ့သလိုမျိုးပေါ့
အဖိုးရဲ့ သားတွေ သမီးတွေ ဘယ်သွားနေသလဲ လို့
အိမ်ကြီးတလုံးထဲ မြေးတယောက်နဲ့အတူနေတဲ့ အဖိုးကိုမေးတော့
ဒါနဲ့ဆို ၂၃ ရွာမြောက် ဘန်ကောက်သွားတဲ့ရွာ
အိမ်တိုင်မှာ လူငယ်မရှိ မိဘဖိုးဖွားတွေသာရှိ
ည … ညဆို
ဘန်ကောက်က ပြန်လာတဲ့ အမိုးရဲ့သမီး
အရှုးမကြီးက ရောက်တတ်ရာရာ အော်ဟစ်နေတတ်ရဲ့။
မျှော်လင့်ခြင်းသစ်သီးကို ပြန်ယူသွားဖို့ ပြောပေးပါ။
ဒါ … သူ့အလိုလို ဖြစ်လာတာ
ဖိနှိပ်မှု ကင်းမဲ့ရေးအတွက် တော်လှန်ပြောင်းလဲပစ်ရမယ်။
SSA နဲ့ KIA ကို ၀န်ရံကြ … ကူညီကြ
အလွမ်းတွေဟာ ကြယ်စင်တွေလို ပျံ့ကျဲသွားကြလို့။
သူတို့ ကျေးလက်တွေကို မှတ်ဥာဏ်ကတ်ထဲထည့်သွင်းလိုက်လို့
ကျေးလက်တွေသာ မြို့ပြ ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်လိုက်နဲ့
မြို့ပြဟာ ကျေးလက်ဒေသတွေကို ခက်ခက်ခဲခဲ ရှာဖွေလို့။
ဒီမိုးနဲ့ဆို ၂၄ မိုး ရှိပြီး
ဖောက်ပြန်သူတွေအပေါ် ငါတို့ အားလုံးမှားယွင်းကြမယ်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုအပေါ် ဖောက်ခွဲပစ်လိုက်ရရင် ကောင်းမလား။
တိုင်းတပါးသားတယောက်နဲ့ မင်း… သိပ်လွတ်လပ်လွန်းတယ်
ဒီက မင်းရဲ့ သားလေးတယောက် ခဏခဏ အလွမ်းမီးတောက်နေလေရဲ့။
ဟေး … … ခင်ဗျားတို့
တော်လှန်ရေးကို လူငယ်တွေ မလုပ်ရင်
အဖိုးကြီးတွေလား … ။
ဟစ်ဟော့လို့ ပြောနိုင်မလား။ ။
Posted by A'karikz Yannaing at 11:50 PM